Isisombululo sokugcina esinoxinano oluphezulu se-HUADE sinikezele ngebhaso le- "Logistics Technology Innovation Prize"
Ixesha lokuposa: Meyi-11-2021
Nge-Epreli, isisombululo esine-high-density anti-dubulo yesitayile esine-indlela yokugcina isisombululo se-cellaring ye-cellaring, eyilelwe yenziwa yi-HUADE inikwe i-"Logistics Technology Innovation Prize" yi-China Federation of Logistics & Purchaing (CFLP). YENZA ...Funda ngokugqithisileyo »
Iindlela ezine zokuhamba
Ukusukela ngo-2016, ngamava amaninzi aphumeleleyo kwinkqubo yokugcina iziphatho ezenzekelayo, uHuade uphuhlise izizukulwana ezi-3 zendlela yesiphekepheke, isizukulwana sokuqala senzelwe umzi-mveliso wotywala onento yokuqhushumba, isizukulwana sesi-2 sayilwa w. ..Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha Post: Nov-26-2020
Okwangoku, yonke inkampani kufuneka ihlale ineempawu zayo ukuze ihambisane nokwenziwa kwamaxesha kwintengiso yokhuphiswano. Ke ngoko, ukukhetha ezona nkqubo zibalaseleyo nezifanelekileyo kubaluleke kakhulu. Iinkqubo zokugcina ezizenzekelayo, ezinje nge-AS / RS syste ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukukhula kweShishini ngexesha loBhubhane
I-HUADE, njengayo yonke inkampani, ichaphazelekile yintsholongwane ye-corona ngonyaka we-2020. Nangona kunjalo, ukusebenza kunye namaqabane ethu, abasasazi kunye nabathengi kwihlabathi liphela, njenge-Yurophu, iMelika, uMbindi Mpuma kunye ne-Asiya, i-HUADE yenza iinzame ezinkulu ekukhuleni. inkampani yethu. ...Funda ngokugqithisileyo »